Nagu saabsan - Guangzhou Xia Yong Sanitary Ware Co., Ltd.
Guangzhou Xia Yong Sanitary Ware Co., Ltd. waa shirkad hoosaad ka ah Guangdong Xia Yong Sports Industry Co., Ltd. In ka badan 10 sano, shirkadeena waxaa ka go'an naqshadeynta, horumarinta iyo soo saarista barkadaha musqulaha ee SPA, qolalka uumiga, musqulaha qubeyska, qolalka qubeyska, sawnada iyo qalabka lagu dabaasho. Waqtigan xaadirka ah, waxaan leenahay saldhig wax soo saar oo gaaraya 10,000 mitir murabac iyo koox shaqaale khibrad iyo khibrad leh leh.
Labadaba tayo aad u fiican, xariifnimo gaar ah, iyo abuurista iyo hagista sharraxaadda madadaalada, iyo ku shubista tayo aad u fiican hal. Badeecad kasta, laga bilaabo xulashada maaddada, naqshadeynta illaa been abuurka, waxay u hoggaansameysaa heerarka fasalka koowaad iyo shuruudaha joogtada ah. Faahfaahin kasta iyo wax soo saar kasta waxay la kulmaan shuruudahaaga tayada sare leh, oo kuu oggolaanaya inaad ku qanacdo qeexitaanka dhabta ah ee tayada kaamil ah.
Xia Yong Sanitary Ware wuxuu diiradda saarayaa sidii macaamiisha loo siin lahaa alaabada barkadda dabaasha ee ugu tayada wanaagsan. Waxaa ka go'an kor u qaadista sumcadda adduunka, iyo hadafka ah in sumaddan laga dhigo mid qof walba la heli karo, badeecooyinkeeda waxaa loo dhoofiyaa Bariga Dhexe Aasiya, Koonfur-bari Aasiya, iwm, waxaana si wada jir ah u aqoonsaday isticmaaleyaasha gudaha iyo dibedda. Xia Yonghui wuxuu u hoggaansamayaa "Macaamiisha marka hore, adeegga marka hore" ujeeddada, si loo siiyo dadka isticmaala adeegga ugu tayada fiican.
Badeecada nooca 'Xia Yong' waxaa muddo dheer tijaabiyey Xafiiska Kormeerka Alaabta Isboortiga Qaranka, heerarka warbixinta imtixaankuna waxay buuxinayaan shuruudaha qaran, oo ay ka mid yihiin shahaadada nidaamka maaraynta tayada ISO9001, shahaadada nidaamka maaraynta caafimaadka iyo maareynta shaqada ee ISO18000, shahaadada nidaamka maaraynta deegaanka ee ISO14000 iyo EU Shahaadada nidaamka caalamiga ah ee CE, tikniyoolajiyadda iyo tayada wax soo saarku waxay gaadheen heer xirfad-yaqaannimo. Sannadkii 2019, Xia Yong waxaa la guddoonsiiyay cinwaanka Shirkadda Guangdong ee u hoggaansameysa qandaraaska iyo aaminaadda ganacsi. Isla mar ahaantaana, nooca Xia Yong wuxuu kaqeybqaatay carwooyin isboorti, Canton Fair iyo bandhigyo kale oo warshadeyn ah, oo wuxuu ku guuleystey Aqoonsi isla warshadda ah.